Trano fitoeran-javatra mihorona
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny trano prefabrika K-karazany?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-04-07
Raha ny tena izy, ny trano vita miorina K-type dia antsoina koa hoe trano vita amin'ny tafo fitetezana. Mizara telo izy: ny trano efa vita prefabrika, ny trano efa vita mahazatra ary ny trano efa vita amin'ny tsena ankehitriny. Amin'izao fotoana izao, mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, ny modules mahazatra afaka ...
Inona avy ireo tombony lehibe ho an'ny trano fitoeran-tsakafo fonosana?
Na izany aza, ny trano fitoeran-kitapo fisaka dia mateza sy mateza, miaraka amin'ny fahateren'ny rivotra tsara, ny fivorian'ny fiangonana sy ny fivoriambe, ny fahombiazana avo lenta ary ny fanoherana ny hatairana, izay tena tian'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Ankoatr'izay, ny trano fitoeran-tsakafo fisaka dia rafitra tsy miorina amin'ny fr ...
Ahoana ny fanamafisan'ny mpanamboatra trano vita mialoha ny trano efa vitaina?
Ny trano vita miendrika K-karazany namboarin'ilay trano vita miendrika K-karazany dia noho ny tampon'ny hantsana, ka matanjaka kokoa ny fanoherana ny rivotra, ary mahazaka rivotra mihoatra ny haavo 8. Ny trano vita prefabrika K-karazany koa dia trano voaorina ara-toekarena miaraka amina rafitra vy maivana toy ny taolana ...
Inona avy ireo tombony azo amin'ny trano fitoeran-javatra tsy mitovy amin'ny trano nentin-drazana?
Inona avy ireo tombony? Ny fanamboarana trano fitoeran-javatra efa vita mialoha dia entina ilazana trano miorina eo an-toerana miaraka amina singa vita mialoha. Ny tombony an'ity karazana tranobe ity dia ny hafainganam-pandeha haingana, tsy voafehin'ny toe-tany, ny fitehirizana ny asa ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanamboarana. W ...
Ahoana ny famahana ireo toe-javatra misy ireo kaontenera fonenana?
Ankehitriny, ny kaontenera fonenana dia be mpampiasa amin'ny fiainana andavanandron'ny olona. Maninona no mifidy kaontenera hipetrahana? Izany koa dia satria mora mihetsika. Ho an'ny saha toa ny injeniera sy ny fanamboarana, mandra-pahatapitry ny vanim-potoana fananganana, ny tranon'ny mpiasa dia mety ho reloca ...
Nahoana ny kaontenera no azo ampiasaina hananganana trano?
1. Ny firafitry ny rafitra dia mora amboarina Fantatry ny rehetra fa ny tranon'ny kaontenera dia karazana firafitry ny rafitra. Ny marindrano sy ny mitsivalana dia tena mety amin'ny takian'ny tarehy amin'ny tranobe. Aorian'ny famolavolana ny sary, ny prototype an'ny trano dia mety ho vita raha mbola ...
Inona no azon'ny trano fitahirizana maitso sy azo antoka ampiasaina?
Tao anatin'izay taona lasa izay, nanjary fahita matetika ny fanovana ireo trano fitoeran-jiro ho trano fonenana, trano fandraisam-bahiny, trano fisotroana boky, trano fonenana ary toerana misy ny birao. Ireo trano fitoeran-javatra dia nanjary nalaza kokoa noho ny fisehony tamin'ny endrika sy lamaody, ny vidiny mirary ary ny fiarovana ny tontolo iainana ary ...
Inona avy ireo vinavinan'ny trano fitoeran-javatra velona?
Ny kaontenera velona dia ampanofaina amin'ny tranobe fanorenan-trano hipetrahan'ny mpiasa, ary ny sasany kosa nividy sy nanofa manokana mba hampiasaina ho birao. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny kaontenera Fiainana dia ny fahalalahana sy ny fanamorana. Ho an'ireo namana miasa amin'ny tranobe fananganana any an'efitra dia tsy ...
O! Ny kaontenera dia afaka mitondra fahasambarana toy izany
Efitra fitahirizam-bokatra ho an'ireo mponina any amin'ny faritra misy loza feno fanantenana ny ankizy Rehefa afaka andro maro taorian'ny horohorontany Ya'an tao Sichuan dia afaka mianatra ara-dalàna ihany ireo ankizy amin'ny faritra voina. Kaontenera no amboarina ireo efitrano fianarana. Manina ny olona isan'andro ...
Inona avy ny sanda fampiasana ny trano fitaterana entana?
Any Guangdong, ny mpanamboatra trano finday fitoeran-tsakafo dia nampivoatra ny haingana indrindra. Misy trano fandraisam-bahiny noforonina sy namboarin'ireo trano fitaterana kaontenera. Ny endrika dia mitovy amin'ny fitoeran-javatra, ary ny atitany dia manana tsiro tsy manam-paharoa. Ny rihana ambany amin'ny hotely dia rakotra gorodona vita amin'ny hazo mitambatra. Th ...
Hotely Container amoron-dranomasina / Holzer Kobler Architekturen + Kinzo
Ireo kaontenera 63 metatra toradroa izay nampiasaina hitaterana entana manerana ny ranomasina dia natambatra tao amin'ny hotely. Ny olona maniry hivezivezy dia afaka manonofy ny ranomasina eto. Any Warnemünde no misy ilay hotely. Noho ny fampiasana kaontenera fanodinana entana ary ny toerana misy ny seranana tokana, ny h ...
Raha trano manokana no tadiavinao dia safidy tsara ny fanovana container
Ny kaontenera dia fitaovana iray singa izay azo entina amina entana fonosina na tsy fonosina ho an'ny fitaterana, izay mety amin'ny famoahana, famoahana ary fitaterana miaraka amin'ny fitaovana mekanika. Ity dia iray amin'ireo fahagagana lehibe indrindra noforonin'ny olombelona. Na izany aza, ankoatry ny fitaterana, ...
Adiresy:704 7th Floor, Building 4, Shenghe Square, No. 3, Shenghe Road, Nancheng Street, Dongguan, Guangdong, China